तपाईको आज (आइतबार) को राशिफल, हेर्नुहोस् आज क-कसलाई छ त फाइदा ?
महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राख्नुहोला । मेहनतको फल अरूलाई सुम्पनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । समयमा सहयोग नजुट्दा अवसर फुत्किन सक्छ । काम बिग्रने डरले सताइरहनेछ । बेसुरमा दिएको वचनले आफैंलाई अप्ठ्यारो पार्नेछ । अप्ठ्यारो पर्दा मान्यजन र अग्रजहरूले साथ दिनेछन् । प्रतिकूल समयमा पनि सद्–व्यवहारले नतिजा अनुकूल हुन सक्छ ।
बेलैमा योजना बनाएर काम थाल्दा राम्रो फाइदा हुनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् भने काममा मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ । प्रयत्न गर्दा राम्रै अवसर जुट्नेछ । साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग जुटाउनेछन् । पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले दिगो योजना प्रारम्भ होला । व्यापारमा मनग्य धनलाभ हुनेछ । सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ ।
अधैर्य व्यवहारले समस्या निम्त्याउला । फाइदा नहुने कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला । समयमा सजग नबन्दा शुभचिन्तकहरू टाढिन सक्छन् । अरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ । कामको सन्दर्भमा केही वादविवाद हुन सक्छ । अवसर आए पनि नयाँ काममा हात हाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। मेहनत गर्दा काम बनाउन सकिनेछ ।
रमाइलो दिन छ । रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् भने पहिलेको सफलताले पनि थप काम गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ । बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन् । प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला छ ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पार्न सकिनेछ । पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । चल–अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा हुनेछ । मिहिनेत गर्दा दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ । कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा मनग्गे धनलाभ हुनेछ ।
प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ । सामाजिक कार्यले हौसला प्रदान गर्नेछ । भूमि, वाहन र कर्मयोगबाट लाभ मिल्नेछ । राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ । काम अड्किए पनि लाभांश प्राप्त भइरहनेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग जुट्नाले महत्त्वाकांक्षी काम बन्नेछ । तारिफयोग्य काम गर्दै नाम र दाम कमाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
अरूको समस्याबारे चासो लिँदा आफैंलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । स्वास्थ्य कमजोर रहे पनि कामको चाप बढ्नेछ । अरूका लागि समय र अर्थ खर्च गर्नुपर्ला । अप्ठ्यारो समयमा पनि अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ । समय लागे पनि चिताएको काम बनाउन सकिनेछ । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा अलि सजग रहनुहोला ।
दौडधुपमै समय बित्नेछ भने मिहिनेत गरीकन चिताएको मूल्य प्राप्त नहुने देखिन्छ । अध्ययनमा बाधा पुग्नेछ भने अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ । काम समयमा पूरा गर्न मुस्किल देखिछ । हुलमुलमा धनमाल जोगाउन सजग रहनुपर्ला । स्वास्थ्यका लागि आराम र खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला । मिहिनेत गर्दा उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ ।
दिन मनोरञ्जनपूर्ण र उत्साहवर्द्धक रहनेछ । आँटेको काम बन्नाले भौतिक सुविधा बढ्नेछ । साथीभाइको आगमनले काममा हौसला जाग्नेछ । रमाइला ठाउँको भ्रमण गर्ने अवसर जुट्नुका साथै आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुने समय छ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ । सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउन सक्छ । सामान्य अर्थ लाभ हुनेछ ।
मिहिनेतीहरूका लागि दिन उत्साहजनक रहनेछ । प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त हुनेछ भने द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् । पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ । चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने शत्रुहरू परास्त हुनेछन् । व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । महत्त्वाकांक्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय छ ।
छिटो फल प्राप्त गर्ने आकांक्षाले समस्या निम्त्याउनेछ । अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला । अवसर आए पनि नयाँ काममा हातहाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि गरेको काम बन्नेछ । समयको मागअनुसार चल्ने प्रयास गर्नुहोला । बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । मेहनत गर्दा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ ।
वि.सं. २०७७ भदौ २८ आइतवार (इ.स. २०२० सेप्टेम्बर १३)
यस्तो छ तपाईको शनिबारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क-कसलाई छ त शुभ ?